‘हेडसर’ को कुटाइबाट विद्यार्थी सख्त घाइते ! — Newskoseli
‘हेडसर’ को कुटाइबाट विद्यार्थी सख्त घाइते !
सुनसरी कोशी गाउँपालिका– ७, हरिपुरका १७ वर्षीय गौतम पाठक आफ्नै विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट घाइते भएका छन् ।
साथी–साथीबीच भनाभनको विषयलाई लिएर आइतबार मध्याह्न सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिका– ४ स्थित प्रिसियस एकेडेमीका प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश यादवसहितका शिक्षकले रबरको पाइपले आफ्नै विद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी पाठकलाई निर्घात कुटपिट गरेको पीडित पाठकले बताएका छन् ।
पीडित पाठकले आफूलाई कोठामा थुनेर प्रधानाध्यापक सर ओमप्रकाश यादव, चालक कमल दास, चन्दन यादव र नन्दकिशोर यादवसहितले लाठी र रबरको पाइपले कुटपिट गरेको बताए । कुटपिटबाट पाठकको कानबाट रगत निस्केको छ भने शरीरभरि नै निलडाम रहेको पीडितका ठूलो बुबा श्यामानन्द पाठकले बताए । घाइते पाठकको स्थानीय क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ ।
उनले आफूलाई अपांग बनाई दिने, पढ्ने सपना चकनाचुर पारिदिने भन्दै पालोपालो गरी प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश र शिक्षकले निर्घात कुटपिट गरेको आरोप लगाए । पीडित पाठकले कुटपिट गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उता प्रधानाध्यापक यादवले कुटपिट गरेको स्वीकार गर्दै अपांग बनाउने गरी नकुटेको दाबी गरे। यादवले आबेगमा आएर कुटपिट गरेको भनी स्वीकारे। यो घटना मिलाउने प्रयासमा समेत रहेको यादवले बताए । रासस
कलेजको गम्भीर लापरबाही : इन्जिनियरिङका विद्यार्थीको बिचल्ली
मेडिकल कलेजहरूले असुलेको बढी शुल्क फिर्ता हुने
क्याम्पसहरुलाई ‘सुध्रन’ ९० दिनको ‘अल्टिमेटम’ !
कुनै बन्द–हडतालले कहिल्यै नछुने यो एउटा विद्यालय…
विश्वविद्यालय पढाउनेलाई पीएचडी अनिवार्य !
‘पढाउने जिम्मेवारी बहन गर्न’ शिक्षकलाई मन्त्रालयको आग्रह
इमेल (लेख–रचना/समाचारका लागि):
इमेल (विज्ञापनका लागि) :
विष्णु आले ‘विकिरण’
Tweets by Newskoseli
Copyright © 2016-2019 News Koseli | Powered By EasySoftnepal